EF-650/850/1100 Automatic Folder Gluer
Ubungakanani bobungakanani bebhodi yePhepha
Ubuncinane bobungakanani bebhodi yePhepha
Ibhodi yePhepha eSebenzayo
Ibhodi yephepha 250g-800g;Iphepha elonakeleyo F, E
Isantya esiphezulu sebhanti
Icandelo lerejista esecaleni
Icandelo lokusonga kwangaphambili
Icandelo elisezantsi lokutshixa i-crash
Iyunithi yokuncamathela esezantsi kwicala lasekhohlo
Iyunithi yegluing esezantsi kwicala lasekunene
Isixhobo sokusila esinothuli
HHS 3 Guns inkqubo yeglu ebandayo
Ukusonga kunye necandelo lokuvala
Icandelo le-Pneumatic Press
Isixhobo se-4 & 6-kona
Iyunithi yeTrombone eqhutywa yiServo
Tshixa isixhobo sesquaring esisezantsi kumhambisi
Pisixhobo se-neumatic square kumhambisi
Isixhobo sebhokisi encinci
Imveliso yokubonisa i-LED
Isitishi sokukhupha kwitrombone
Misikrini esichukumisayo esinojongano loyilo lwegraphic
I-feeder eyongezelelweyo kunye nebhanti yokuthwala
Ulawulo olukude kunye nokuxilongwa
Inkqubo yePlasma enemipu emi-3
24 Umsebenzi weMemori ukugcina imisebenzi ephindaphindiweyo
25 Isixhobo esisezantsi sokuphahlazeka kwe-non-huku
26 Umqobo wokukhanya kunye nesixhobo sokhuseleko
27 Isixhobo sokuguqula iqondo le-90
28 Iteyiphu encamathelayo incamathele
29 Ukucofa i-roller evela eJapan NSK √
30 Inkqubo yeglue ye-KQ 3 enempompo yoxinzelelo oluphezulu
I-1) iCandelo le-Feeder
Icandelo le-Feeder linenkqubo ye-motor drive ezimeleyo kwaye ugcine ungqamaniso kunye nomatshini oyintloko.
Iipcs ezi-7 zebhanti lokutyisa le-30mm kunye ne-10mm yentsimbi yepleyiti yokuhamba ecaleni ukuseta ububanzi.
I-roller eboshiweyo ikhokela ibhanti yokutya.Iifaskoti ezimbini ezisecaleni zihambelana noyilo lweemveliso.
Icandelo le-Feeder lixhotyiswe nge-blade yokutya emithathu ngaphandle ukulungelelanisa ngokwesampuli yemveliso.
Isixhobo sokungcangcazela sigcina ukutya kwephepha ngokukhawuleza, ngokulula, ngokuqhubekayo kwaye ngokuzenzekelayo.
Icandelo le-Feeder elinobude obungama-400mm kunye nesixhobo esichasene nothuli sebrashi siqinisekisa ukutya okugudileyo kwephepha.
Umsebenzisi unokusebenzisa iswitshi yokondla kuyo nayiphi na indawo yomatshini.
Ibhanti ye-feeder inokuxhotyiswa ngomsebenzi wokufunxa (Ukhetho).
Imonitha ezimeleyo inokuhlola ukusebenza kumsila womatshini.
2)Iyunithi yerejista esecaleni
Iphepha elivela kwiyunithi yokutya linokulungiswa kwiyunithi yerejista esecaleni ukuze kuqinisekiswe ukutya okuchanekileyo.
Uxinzelelo oluqhutywayo lunokulungelelaniswa phezulu naphantsi ukuze lulingane nobukhulu obahlukeneyo bebhodi.
3)Icandelo lokusonga kwangaphambili
Uyilo olukhethekileyo lunokubeka ngaphambili umgca wokugoqa wokuqala kwii-degrees ze-180 kunye nomgca wesithathu kwii-degrees ze-165 ezinokwenza ibhokisi libe lula ukuyivula.I-4 ikona inkqubo yokusonga ngeteknoloji ye-servo-motor ehlakaniphile.Ivumela ukusongwa okuchanekileyo kwazo zonke iiflephu zangasemva ngokusebenzisa amagwegwe afakwe kwiishafu ezimbini ezizimeleyo ezilawulwa nge-elektroniki.
4) Icandelo elisezantsi lokutshixa i-crash
Ukusonga okutshixa ezantsi ngoyilo olubhetyebhetye kunye nokusebenza ngokukhawuleza.
I-crash-bottom ingagqitywa kunye neeseti ezi-4 zeekiti.
Amabhanti angaphandle angama-20 mm kunye namabhanti angaphantsi angama-30mm.Ipleyiti yeebhanti zangaphandleinokulungiswa phezulu naphantsi ukuze ilingane nobukhulu obahlukeneyo bebhodi ngenkqubo yecam.
5) Iyunithi yeglue ephantsi
Iyunithi yeglue ekhohlo nasekunene ixhotyiswe nge-2 okanye 4mm ivili leglu ekhoyo.
6) Ukusonga kunye necandelo lokuvala
Umgca wesibini yi-180 degrees kunye nomgca wesine yi-180 degrees.
Uyilo olukhethekileyo lwesantya sebhanti lokusonga lunokulungelelaniswa ngabanye ukulungisa indlela ebaleka ngayo ibhokisi ukuyigcina ithe tye.
7) Ukulungiswa kweeMotoli
Ulungelelwaniso lweMotoli lunokuxhotyiswa ukufezekisa uhlengahlengiso lwepleyiti yokusonga.
8) Icandelo le-Pneumatic Press
Icandelo eliphezulu linokuthi lihanjiswe ngasemva nangaphambili ngokuxhomekeke kubude bebhokisi.
Ukulungiswa koxinzelelo lwe-pneumatic ukugcina uxinzelelo olufanayo.
Isiponji esikhethekileyo esongezelelweyo sinokusetyenziswa ukucinezela iinxalenye zeconcave.
Kwimowudi ye-auto, isantya secandelo lokushicilela gcina i-synchrony kunye nomatshini ophambili wokunyusa ukuhambelana kwemveliso.
9) 4 & 6-ikona isixhobo
Inkqubo ye-Yasakawa servo enemodyuli eshukumayo iqinisekisa impendulo yesantya esiphezulu ukuhambelana nesicelo sesantya esiphezulu.Isikrini sokuchukumisa esizimeleyo siququzelela uhlengahlengiso kwaye senze umsebenzi ube bhetyebhetye.
10)Iyunithi yeTrombone eqhutywa yiServo
Yamkela inkqubo yokubala yeefotocell ngephepha elithi "kicker" ngokuzenzekelayo okanye inki yokutshiza.
Umatshini wokuhlola iJam.
Ibhanti eliphezulu lisebenza ngokusasaza okusebenzayo.
Iyunithi yonke iqhutywa yi-servo motor ezimeleyo yohlengahlengiso lwesithuba sebhokisi njengomnqweno.
11) Tshixa isixhobo esisezantsi sesquaring kwindawo yokuhambisa
Isixhobo esisikwere sinokuqinisekisa ukuba ibhokisi yentsimbi yesikwere kakuhle kunye nohlengahlengiso lobude bebhanti yokuhambisa enemoto.
12)Isixhobo se-pneumatic square kwi-conveyor
Isixhobo se-pneumatic esisikweri esinezikhweli ezimbini kwindawo yokuhambisa inokuqinisekisa ibhokisi yebhokisi enemilo ebanzi kodwa engenzulwanga ukufumana isikwere esigqibeleleyo.
13) Isixhobo sebhokisi encinci
Isikrini esichukumisayo esinembonakalo yoyilo lwegraphic ukuze usebenze ngokulula.
14)Isikrini esiphambili sokuchukumisa esinembonakalo yoyilo lwegraphic
15) Umsebenzi wememori ukugcina imisebenzi ephindaphindwayo
Ukuya kuthi ga kwi-17 iiseti ze-servo motor khumbula kwaye ulungelelanise ubungakanani bepleyiti nganye.
Isikrini sokuchukumisa esizimeleyo siququzelela ukuseta umatshini kubungakanani obuthile ngokuchasene nomyalelo ngamnye ogciniweyo.
I-16) isixhobo esisezantsi sokuphahlazeka kwe-NON-hook
Nge-slope yoyilo olukhethekileyo, ezantsi kwebhokisi kunokuphazamiseka ngesantya esiphezulu ngaphandle kwe-hook eqhelekileyo.
17) Isithintelo sokukhanya kunye nesixhobo sokhuseleko
I-inshorensi yoomatshini egcweleyo susa konke ukwenzakala okunokwenzeka.
Isithintelo sokukhanya kweLeuze, isitshixo socango lohlobo lwelatshi kunye nokuhanjiswa kokhuseleko kuzalisekisa isicelo se-CE ngoyilo lwesekethe olungafunekiyo.
I-18)Ukucinezela i-roller ethwele evela eJapan NSK
Gqibezela i-NKS njengomatshini wokushicilela umatshini ohamba kakuhle ngengxolo ephantsi kunye nexesha elide.
IiNkcazo kunye neeBrand zamaCandelo aPhambili kunye neZincedisi
Igama Uphawu imvelaphi
IMotor engundoqo I-Dong Yuan eTaiwan
Inverter V&T Idityanisiwe eTshayina
Umntu-Umatshini interface Umphathi wePaneli eTaiwan
ibhanti ye-synchronous I-OPTI Jemani
Ibhanti ye-V-Ribbed Hutchinson Franch
Ukuthwala NSK, SKF eJapan/eJamani
Ishaft engundoqo eTaiwan
Ibhanti yokucwangcisa NITTA Japhan
PLC Fatek eTaiwan
Amacandelo ombane Schneider Jemani
Umoya I-AIRTEK eTaiwan
Ukufunyanwa kombane SUNX Japhan
Umkhomba ndlela SHAC eTaiwan
Inkqubo ye-Servo Sanyo Japhan
Umatshini uthatha i-multi-groove ibhanti yokuhanjiswa kwesakhiwo esinokwenza ingxolo ephantsi, ukusebenza okuzinzileyo kunye nokugcinwa lula.
Umatshini usebenzisa i-converter frequency ukufezekisa ulawulo oluzenzekelayo kunye nokugcina amandla.
Umsebenzi oxhotyiswe ngohlengahlengiso lwebha yezinyo enye kulula kwaye kulula.Ukulungiswa kombane kusemgangathweni.
Ibhanti yokondla yamkele ibhanti elityebileyo elongezelelweyo elixhotyiswe ngemoto yokungcangcazela ukuze kuqinisekiswe ukondla okuqhubekayo, okuchanekileyo kunye nokuzenzekelayo.
Ngenxa yeplati yecandelo lebhanti elinoyilo olukhethekileyo, ukunyanzeliswa kwebhanti kunokulungiswa ngokuzenzekelayo ngokweemveliso endaweni yezandla.
Uyilo olukhethekileyo loyilo lweplate alugcini nje ukukhusela i-elastic drive ngokufanelekileyo kodwa lunokuthintela umonakalo ngenxa yokusebenza ngokungafanelekanga.
I-tank ye-gluing ephantsi kunye nohlengahlengiso lwe-screw ukuze usebenze ngokufanelekileyo.
Adopt touch screen kunye ne-PLC inkqubo yokulawula kunye nolawulo olukude.Ixhotyiswe ngokubala kwe-photocell kunye nenkqubo yokumakisha i-auto kicker.
Icandelo le-Cofa lithatha izinto ezikhethekileyo kunye nokulawula uxinzelelo lwe-pneumatic.Ixhotyiswe ngebhanti yesipontshi ukuqinisekisa iimveliso ezigqibeleleyo.
Wonke umsebenzi unokwenziwa ngezixhobo ezingundoqo ezine-hexagonal.
Umatshini unokuvelisa iibhokisi ezinomgca othe tye ngokusongwa kwangaphambili kwe-1st kunye ne-3rd creases, udonga oluphindwe kabini kunye ne-crash-lock ezantsi.
Ngaphambili: I-GUOWANG R130Y UMSHISHINI OZIZENZAKALELAYO OTSHINTSHA NGEFOLI
Okulandelayo: I-GW-P IPHEPHA ELIPHAKAMILEYO LOKUSIKA IPHEPHA
ZH-2300DSG Semi-Automatic iziqwenga ezibini Carton Fol...